Mega funfair Gelredome amalitela! - Thrilltalk.com
Home/Ihe/Mega ngosi Gelredome amalitela!
Mega ngosi Gelredome amalitela!
0 28 Ejiri 2 gụọ
E wezụga ámá egwuregwu nke Vitesse na Arnhem, “Mega ngosi Gelredome ”amalitela. Site na 31 Julaị ruo 23 Ọgọstụ ị nwere ike nweta ndị g-agha gị ebe a n'ọtụtụ ebe ebe nkiri. N'ezie ị ghaghị iburu n'uche na nha na-emetụta gburugburu corona.
Ihe ndị metụtara ya
Ogige ntụrụndụ na vidiyo vidio na Youtube
Izu atọ gara aga
Gọọmentị gọọmentị na-egosi ndị ọrụ na-atụ oyi
Ndị a bụ iwu nke ndị nhazi:
N'ọnụ ụzọ, ị ga-ewepụsị aka gị na ndị ọbịa 12 afọ ma ọ bụ karịa ga-ejupụta asambodo ahụ ike.
Nkwupụta a bụ maka gị na nchekwa anyị ụkpụrụ nduzi RIVM ji anyị ụgwọ inyefe gị nkwupụta a wee bịanye aka na ya. Biko rịba ama na anyị achọghị kaadi NJ ma ọ bụ ihe ndị yiri ya na n'okpuru iwu nzuzo, okwu ndị a ga-ebibi na njedebe nke ọnwa.
Kwụ ụgwọ maka nri, ihe ọ drinksụ drinksụ na ihe ụtọ na-enweghị kọntaktị dịka o kwere mee, mana ọ ga-ekwe omume ịkwụ ụgwọ ego.
Saịtị ahụ, dị ka ị hụgoro, sara mbara zuru ezu nke na enwere ike ịkwado ụkwụ ise ahụ na-enweghị atụ, ma a ga-enwe nyocha anya na nke a na-adịghị ahụ anya iji hụ na ọ gaghị eju oke. Nke a bụ inwe ike ikwe nkwa nchekwa yana mgbe ọ na-arụsi ọrụ ike, a ga-emechi ohere ịbanye nwa oge ma a ga-anabata ndị mmadụ ọzọ site na iji ụzọ esi apụ. Ya mere, na-agbaso ntuziaka nke ndị ọrụ anyị mgbe niile.
Ya mere ndị mmadụ ga-ebu ụzọ pụọ tupu ndị ọhụụ abanye.
Enwere isi disinfection zuru ezu yana ụlọ mposi na saịtị ahụ. E mepụtara nke a ma mezuo ya nso site na ime obodo Arnhem, Stadion het Gelredome na ndị nzukọ.
Ihe niile dabere na iwu nke RIVM iji hazie ngosi ngosi ọchị na-adịghị mma.
Ikuku Ikuku Ikuku
Disco Jumper XXL
Factlọ ọrụ na-atọ ụtọ
Obi ụtọ Ududo
Penguin Party Dodgems
Labyrinth nke mmiri ozuzo
Echefuola Izere Adventure
Cgbọ ala ọhịa
De emepe awa nke ngosi bụ kwa ụbọchị site na 13: 00 pm ka 23: 00 pm. Ikwesiri idebe mita 1,5 na saịtị ahụ. Nke a dị mfe ịme n'ihi na ngosi ahụ sara mbara. Na iche iche ebe nkiri e nwere naanị otu ụzọ ịbanye mma.
Iji nweta ebe ngosi a, ị ga-emerịrị ma tinye nkwupụta ahụike. E nwere ọtụtụ ihe zuru ezu na saịtị ahụ iji kpochapụ aka gị. Nwere ike ịchọta mgbapụta dị otú ahụ na mma ọ bụla. Ga-ahụkwa ọkọlọtọ ebe niile na-echetara gị nke nha. Nchọpụta anyị bụ na nke a na-aga nke ọma n'ọhịa. N’uhuruchi, ị ga-achọpụta na ndị na-eto eto amachaghị nke ọma na nha dị ka ọ na-amalite na-arụsi ọrụ ike.
Ihe ngosi a nwere ike ịba elu n'oge ndị a karịa afọ ndị ọzọ. N'agbanyeghị nke nha ị maghị n'ezie ịhụ ya. Nwere ike zuru ike na ngosi na-enwe na ebe nkiri: ikuku na nri. Nwere ike iji aka gị kpochapụ aka gị ebe niile ma ndị ọbịa na-arapara na mita 1,5.
Ogologo nri dị iche iche, ị nwere ike ịchọta, n'etiti ihe ndị ọzọ: poffertjes, bratwurst, churros, dúrum, fries na n'ezie oliebollen. Nwere ike n'ezie ịgba chaa chaa na ụlọ ahịa dị iche iche.
N'ihe niile, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị lee anya ma ọ bụrụ na ibi na Arnhem ma ọ bụ bi nso. Ihe ngosi a na - enweta 4 n’ime 5 n’aka anyị!
arnhem okpueze Gelredome Kpamkpam nha Mega ngosi
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit VKontakte Kekọrịta site na email Bipute
Universal Orlando na-ahazi oge mmeghe
Nọrọ na nche mgbe COVID-19
Echekwala ngosi ọzọ!
Ihe ngosi ahụ ga-agbanwe n'ihi corona
Fairlọ ikpe mara na Ede alala azụ!
Ezigbo ezinụlọ Buwalda na-atụ anya inwe ike ịga njem na ihe ọhụrụ na 2021
The adreesị ozi-e gị agaghị bipụtara. Ejiri ubi a choro *
Zọpụta aha m, email na saịtị na ihe nchọgharị a maka oge ọzọ m ga-aza.
Ka afọ asatọ gachara, ụlọ ezumezu dị na Ede alọghachitela
0 debanyere aha
Nweta tiketi maka Duinrell na ụbọchị Valentine
Oge mbu: Mbipụta nke Duinrell
SeaWorld ga-anabata Howl-O-Scream na Ọktọba
Energylandia na-ekwupụta Aqualantis
Ndị na-eme ihe ngosi na-atụ egwu usoro ọhụrụ
Disney na-akwụsị ire ahịa kwa afọ
A ga-emeghe Ferrari Mission na Ferrari World n'afọ a
Akpa foto Time Machine nke Buwalda
N'agbanyeghị, na-adịghị mma search banyere nke a ogige. Dị mma n'anya. Walibi ...
Hey Xander. Anyị enweghị ihe ọ bụla megide Walibi Holland ị maara. A ...
Ebube mara mma? M tụrụ anya karịa na ya. Apụghị m ...
Nke a agaghị eme n'ezie. A ụgbọ oloko ọhụrụ na-abịa na ...
Ego ole wiil nwere oche nkwagharị nwere? - Thrilltalk.com
[…] Otú e si ewu ha. N'ime ụlọ ọrụ ha ...
Ihe ndị na-ewu ewu
Copyright 2021, Ikike niile echekwabara | Thrilltalk.com
Gaa na bọtịnụ n'elu